Ukuhamba Ukusuka ERoma Ukuya EParis Ngu-Highspeed Sitimela | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > Ukuhamba Ukusuka ERoma Ukuya EParis Ngu-Highspeed Sitimela
Isikhathi sokufunda: 3 amaminithi(Kugcine ukubuyekezwa On: 14/05/2020)
Paris neRoma phezulu ohlwini ebhakedeni cishe zonke isihambi sika. Le mizi umbukwane ezidume ngokuba amasiko abo, eziphambili emhlabeni cuisine, enkulu izakhiwo kanye nokunye okuningi. Nakuba iRoma ne Paris ziqhelelene, baphumula kahle kakhulu zixhunywe isitimela. Lokhu kusho ukuthi akudingeki ukuba ukhethe phakathi kwalezi emadolobheni omangalisayo, ungavakashela kubo bobabili! Ukuze sikusize ukwenza lokhu uhambo njengoba kujabulise ngangokunokwenzeka sabelana nawe ukuthi ungasuka kanjani eRoma uye eParis ngesitimela iHighspeed.
Hamba nge- ngesivinini izitimela
Ungakwazi ukushesha eFrance nase-Italy usebenzisa kuphela ngesivinini uxhumano. One of the fastest and most comfortable ways to travel from Rome to Paris is by taking the Thello isitimela sejubane elisheshayo. Lokhu isitimela wesimanje ngeke uphehle eParis Ngokuphazima kweso. Okokuqala, uzothatha isitimela esinejubane elikhulu esiya eRoma esiya eMilan naseMilan ukuya eParis ezitimeleni eziphezulu zeThello. Isikhathi sokuhamba zalolu hambo kuyahlukahluka, kuye ngokuthi yiziphi ukuqeqesha ukha. Sincoma ukubhuka izihlalo zakho kusengaphambili njengoba kumele wenze ukubhuka lezi izitimela ukuvikela isihlalo.
ILyon ukuya ezikhathini zeNice Sitimela
Thatha umzila ebabazekayo – I-Roma iya eParis ngesitimela i-Highspeed
Kuya ngomzila onquma ukuwuthatha lapho usuka eRoma usiya eParis ngesitimela esiphakeme, ungase ufune ukujabulela ukuhlola elinye lamadolobha amahle waseFrance endleleni. nice soaks up ubuhle Provence nokwabelana ngokusebenzisa langa yayo amabhishi, ukuvakasha Lubanzi kanye ezivulekile izimakethe. Imisa ngo Nice kuzokuvumela ubone enye ingxenye emangalisa waseFrance ngeke kahle nihlukane uhambo lwakho eseRoma Paris.
Vakashela kweminye imizi yaseYurophu endleleni
Yenza okuhle kwe-inkululeko yakho ngokusebenzisa izitimela kwesifunda futhi ephumula ucime nezinye amadolobha aseYurophu. Izikhangibavakashi eseRoma Milan, ungene Geneva ungakafiki lapho uya khona yakho – Paris.
Ayikho travel isitimela amahora iphelile amane ubude. Lokhu kwenza le umzila kahle yanoma yikuphi owenza ngubani ukungathandwa eside isitimela ugibele. Kuyinto enhle sikhumbule ukuthi amadolobha athile ezibizayo ukuvakashela kunabanye, ngakho kuye ibhajethi yakho ungase ukhethe i uhambo lokho akuhlanganisi yonke imizi esiyibalile. Bheka iwebhusayithi yethu futhi ungenza uhambo lwakho lomuntu siqu ukukusiza usuka eRoma uye eParis ngesitimela esiphakeme kodwa futhi usuka eParis uye eRoma ngesitimela esifanayo. Ungase futhi ugcine usesikhathini ukukhushulwa zakamuva ekhasini lethu Facebook, Twitter futhi Amakhasi Instagram.
Ukucabanga nokwenza mzila eseRoma Paris ngokwakho? Iya ku SaveATrain Online ukuhlola zonke fares yethu kwekhethelo futhi uqale uhlela adventure wakho olandelayo!
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, bese uchofoza lapha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F - (Skrolela phansi ukuze ubone Shumeka Ikhodi)
#geneva roma Izincwajana zemininingwane Izikhangibavakashi travelnice travelparis travelrome